गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन विफलताको कारण के हो? : मुनिष – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsगोर्खाल्यान्ड आन्दोलन विफलताको कारण के हो? : मुनिष
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन विफलताको कारण के हो? : मुनिष
दार्जीलिङः एकल आयामी भएको कारणनै हालसम्मको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन विफल भएको ठान्छ राष्ट्रिय गोर्खाल्यान्ड कमिटी (एनजीटी)। यसैले आन्दोलनलाई सफल बनाउनु हो भने यसलाई बहुआयामी बनाउनपर्ने यसको सोंच छ। आज यहाँको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा राष्ट्रिय गोर्खाल्यान्ड कमिटीले गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन अनि यसको लागि कस्तो पदक्षेप उठाउनुपर्ने आदिबारे एक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो, जसमा जनआन्दोलन पार्टी, गोरामुमो, अखिल भारतीय गोर्खालीगलगायत अन्य राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधिसँगै गैर राजनैतिक व्यक्तित्वहरुको पनि उपस्थिति थियो।
यसै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एनजीटीका संयोजक मुनिष तामाङले भने-गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई सफल बनाउनको लागि नेता होइन, नेतृत्व चाहिएको छ। नेता बिक्री हुनसक्छ, नेतृत्वले कदापि गद्दार गर्न सक्तैन। यसैले एनजीटीले सबै क्षेत्रमा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने कार्य गर्नुपर्छ, ताकि एउटा क्षेत्रको आन्दोलन सरकारको तन्त्रहरुको कारण विफल बने पनि अन्य क्षेत्रको आन्दोलन सक्रियरूपलेनै सक्रिय रहिरहोस्। हाल गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन केवल राजनैतिक क्षेत्रबाट मात्रै गरियो, जसको कारण सरकारले आफ्ना विभिन्न माध्यमहरु अप्नाएर यी आन्दोलनहरुलाई विफल बनाउने काम गरेको छ।
यसैकारण अब गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई सफल बनाउनको लागि एनजीटीमा सबै क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई सामेल गराएर ठोस कार्य गर्ने योजना बनाइएको छ। उनले भने-गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने गेटको चाबी एनजीटीसित छ भन्ने कदापि होइन अनि एनजीटीले यस्तो दावी गर्दैन पनि। किनभने, यो जिम्मेवारी राजनैतिक पार्टीहरुका लागि छोड़िदिएका छौं। किनभने, राजनैतिक पार्टीहरूलेनै गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने क्षमता आफूसित मात्रै छ भन्ने दावी गर्छन्। यसैकारणनै अहिलेसम्मका गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनहरु विफल भएका हुन्।
सरकारको लागि जनाकांक्षाको कुनै महत्व छैन, जहाँ सरकारमा रहेको पार्टीलाई फाइदा हुन्छ, त्यहाँ जस्तै काम पनि गर्छ। झारखण्ड, उत्तराखण्ड आदि राज्य गठन गर्दा तत्कालीन केन्द्र सरकारले त्यस समयअनुसार आफ्नो फाइदा हेरेको थियो। तर गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण गर्दा सरकारलाई केही फाइदा नहुने देखेपछिनै यसमाथि अझैसम्म सरकारले कुनै पदक्षेप ग्रहण गरेको छैन, न यसमाथि एक शब्द बोल्ने आवश्यकतानै ठानेको छ।
यसैकारण अब गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको आन्दोलनलाई वृहत्तर बनाउनको लागि भूतपूर्व सैनिक, विद्यार्थी, गाड़ी चालक, अधिवक्ता साथै अन्य विभिन्न क्षेत्रको आ-आफ्नै स्वतन्त्र संगठनहरु निर्माण हुनपर्छ, ताकि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई राजनैतिकरूपमा विफल बनाउने कार्य भए पनि उपर्युक्त अन्य संगठनहरुले आ-आफ्नै तरिकाले यस आन्दोलनलाई अघि बढाउन सकिरहोस्, एनजीटीका संयोजक तामाङको यस्तो विचार छ।
यसैमाथि आफ्नो सुझाउ पेश गर्दै जनआन्दोलन पार्टीका व्यूरो सदस्य अमर लामाले भने-पहाड़को राजनीतिले जनतालाई बिक्री हुने सामान बनाएको छ, यो सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा हो। यसैले सर्वप्रथम गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई बहुआयामी बनाउनअघि पहाड़को राजनीतिलाई सुधार्नुपर्छ।
किनभने, राजनीतिसितनै सबै जोड़िएको छ। यसरीनै उनले हिजो भाजपा नेता दिलीप घोषमाथि भएको हातपातको विरोध जनाए पनि उनले गोर्खाल्यान्डको विरोधमा दिएको बयानको भर्त्सना जनाए। उनले भने-गोर्खाल्यान्ड राज्यको गठन भए देशभरिका डेढ करोड़ गोर्खालाई यस राज्यभित्र अँटाउनुपर्छ भन्ने होइन। तब के देशभरिका बंगली समुदायलाई बंगालभित्र अँटाइएको छ? भाजपा नेतालाई यस्तो निम्न स्तरको राजनीति गर्न सुहाउँदैन।
कालेबुङ जिल्ला मोर्चा विनयको पक्षमाः विनयहरूले जिटिए चलाउनु राम्रोः चामलिङ
विमल गुरूङको टिक्टेटरशीपको कारण जीटीएलाई गोर्खाल्याण्ड पुग्ने हतियार बनाउन पाएनौ, विनय तामाङहरूको जिटीए बोर्डलाई मेरो समर्थन छ- सामुएल गुरूङ